ကျွန်တော်တို့ ၉သန်းသောရောင်းဝယ်သူများ အောင်ပွဲခံခဲ့တာ မနေ့တစ်နေ့ကလိုပါပဲ၊ ခုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီရောက်လာပြန်ပါပြီ! ၁၀သန်းသော ရောင်းဝယ်သူများသည် အထင်ကရ ရတုသဘင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဖောက်သည်များ တဖြေးဖြေးတိုးလာခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေကြောင်း သက်သေပြနေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အလွန်ကြီးမားသော အပေးအယူပါပဲ။
ထုံးစံအတိုင်း၊ ကျွန်တော်တို့၏ ၁၀သန်းမြောက် ကုန်သည်ကံထူးရှင်ကို စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။ ဒီအချိန်လေးဟာ အမြဲရင်ဖိုစရာကောင်းပါတယ်: ဒီတစ်ခါ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ? ဒီကုန်သည်က ဘယ်ကဖြစ်မလဲ? သူ (သို့) သူမ ဘာဆုကို တောင်းဆိုမလဲ? မကြာခင်တွေ့ရတော့မှာပါ!
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်တို့ အခြားအရာတစ်ခုနဲ့လာပါပြီ။ ၁၀သန်းဆိုတာ အထင်ကြီးလောက်စရာ နံပါတ်တစ်ခုပါ - ဂရိ (သို့) စင်္ကာပူလူဦးရေနဲ့ ညီမျှလုနီးပါးပါပဲ။ ထို့ကြောင့်၊ အားလုံးအတွက် အံ့အားသင့်စရာပြင်ထားပါတယ် - ရှာဖွေရန် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါ! ၁၀သန်းမြောက် ရောင်းဝယ်သူ၏အမည်ဖြင့် အံ့သြစရာကို ထုတ်ဖော်ပါမည်။